एजेन्सी : कति व्यक्तिलाई आफ्नो सुख सुविधा र उत्कृ,ष्ट जीवनशैलीमा घ,मण्ड हुन्छ । त्यसका,रण उनीहरु अरुलाई खासै म,हत्व दिँदैनन्। घ,मण्डका का,रण थुप्रै स,मस्या बढ्न सक्छन् । यहाँ यस्तै एउटा प्रे,रक प्र,संगबारे कुरा गरिएको छ जसमा समय जुनसुकै बेला पनि परि,वर्तन हुन सक्ने जा,नकारी दिँदै कसैले पनि घ,मण्ड गर्न नहुने बताइएको छ ।
१. प्र,चलित लोक कथा अनसार पुरानो समयमा एक राजकुमार शिक्षाका लागि आ,श्रम जाने बेला सधैंजसो एक वृ,द्ध व्यक्तिलाई भि,ख मा,,गिरहेको देख्ने गर्थे । ती वृ,द्ध बाटोमै बसिरहन्थे र त्यहाँ आ,वतजा,वत गर्ने ब,टुवासँग पैसा र खाना माग्ने गर्दथे। उनले राम्रोसँग खान पाउँदैनथे त्यसका,रण उनी निकै दु,ब्लो थिए, उनको कपडा पनि निकै फोहोर हुन्थे ।
२. राज कुमारसँग सुख सु,विधाका हरेक वस्तु थिए तर उनले ती वृद्ध व्यक्तिलाई फि,टिक्कै मन पराउँदैनथे । एकदिन उनले भिख माग्ने व्यक्ति लाई भने, ‘तिमीसँग केही पनि छैन, भि,ख माग्छौ, यस्तो जीवन किन बाँच्न चाहन्छौ ? किन भाग,वानलाई आफू भए ठाउँ चाँडै नै बोलाउन प्रा,र्थना गदैनौं ?’
३. वृद्ध व्यक्तिले भने, ‘म सधैं साँझ बिहान भ,गवानसँग आफ्नो जीवन कुनै कामको नभएको भन्दै मलाई उहाँहरु भएठाउँ बोलाउन प्रार्थ,ना गर्छु तर भगवानले मेरो प्रा,,र्थना सुन्नु नै हुन्नँ । सायद भगवान म यसै दुनियाँमा रहूँ भन्ने चाहनुहुन्छ ता कि मानिसहरुले मलाई देखेर समय जुनसुकै बेला प,रिवर्तन हुनसक्छ भन्ने जानून् ।’
४. उनले राजकुमारलाई भने, ‘कुनै बेला मसँग पनि धन थियो । मसँग पनि सुख सु,विधा थिए तर मैले कहिले पनि मानिसहरुको मद्दत गरिनँ, मलाई मेरो रुप रंग र धनमा घ,मण्ड थियो । अब मेरो सबैकुरा ब,र्बाद भएको छ, मसँग खानका लागि खाना छैन, लगा उनका लागि कपडा छैन । मलाई देखेर सबैले यो बुझ्नुपर्छ कि कसैले पनि घ,मण्ड गर्नु हुँदैन, सुख–दुः,ख आइरहन्छन्, समय जुनसुकै बेला पनि प,रिवर्तन हुनसक्छ ।’